Knowledge – FunnyPC
Zawgyi သံဃာကို ပြစ်မှား၍ ခွေးစားခံရသူ ခွေးအပေါင်းနဲ့ လေးထမ်းပြီး အမဲလိုက်ထွက်လာတဲ့ ကောကမုဆိုးဟာ လမ်းခရီးမှာ ဆွမ်းခံကြွလာတဲ့ ရဟန်းတပါးကို မြင်တော့ ကုသိုလ်စိတ် မပွားနိုင်တဲ့ အပြင် သူယုတ်နဲ့ ဆုံရတယ် ဆိုပြီး စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်တယ် ။ ရဟန်းယုတ်ကို မြင်ရလို့ သားကောင်လဲ ရမှာမဟုတ်ဘူး လို့ တွေးပြီး တောထဲကို ဆက်ထွက်ခဲ့တယ် ။ …
အရူး​တွေ ကြားထဲမှာ အရူး မဖြစ်​​စေဖို့
Zawgyi အရူး​တွေ ကြားထဲမှာ အရူး မဖြစ်​​စေဖို့ ​ရှေးအခါက တိုင်းပြည်​တ​ပြည်​မှာ မိုး​ခေါင်​​ရေရှား ဖြစ်​ကာ ​ရေအလွန်​ရှားပါး ​သော အချိန်​ဖြစ်​​လေ၏ ။ ထိုအခါ ပညာရှိ သုခမိန် ​အမတ်​ကြီးမှ …. ” မှန်​လှပါ အရှင်​မင်းကြီးဘုရား …. တိုင်းပြည်​မှာ မိုး​ခေါင်​​ရေရှား ဖြစ်​​နေပါသည်​ … သို့ပါ​သော်​လည်း မနက်​ဖြန်​​ နေမွန်းတည့်ချိန်​မှ စ၍ …
အခု ဓာတ်ပုံထဲက မိန်းကလေးရဲ့ အသက်ကို မှန်းကြည့်ပါ သင်လွဲဖို့ များပါတယ်
For Zawgyi အခု ဓာတ်ပုံထဲက မိန်းကလေးရဲ့ အသက်ကို မှန်းကြည့်ပါ သင်လွဲဖို့ များပါတယ် ဂျပန် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Risa Hirako ရဲ့ လက်ရှိ ဓာတ်ပုံတွေပေါ်မှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရုပ်ရည်အရ ဆိုရင်တော့ သူ့အသက်ကို အမှန်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းဖို့ အတော်လေး မလွယ်ကူတဲ့ အခြေအနေပါ ။ လက်ရှိ မျက်မြင်အတိုင်း …
အိမ်သာထဲမှာတွေ့တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်က အစပြုပြီး ဖူးစာဆုံခဲ့သူ ၂ ယောက်
For Zawgyi အိမ်သာထဲမှာတွေ့တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်က အစပြုပြီး ဖူးစာဆုံခဲ့သူ ၂ ယောက် အိမ်သာထဲမှာ တွေ့တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်က အစပြုပြီး ဖူးစာ ဆုံခဲ့ကြပါတယ် ။ အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် Mark Ellis ဟာ အများသုံးအိမ်သာ တစ်ခုရဲ့ နံရံပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ပြီး Message တစ်ခု ပို့ခဲ့ရာကနေ …
Zawgyi နားပင်းနေတဲ့သူ တခါက လင်မယား နှစ်ယောက် ရှိသတဲ့ ။ အသက်အရွယ် ကြီးလာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ယောက်ျား ဖြစ်သူက သူ့မိန်းမ နားမကောင်းတော့ဘူး လို့ သံသယ ဖြစ်မိသတဲ့ ။ သူပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေကို မကြား သလိုလို ပြန်မပြော သလိုလို ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် မိသားစု ဆရာဝန် နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ရ တာပေါ့ …
Zawgyi ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်ပြောနည်း ” ​​မောင်​ ဘီယာကို ဖြတ်မလားး မိန်းမ​ကို ဖြတ်မလား “ ” ဘာမဟုတ်တဲ့ ဘီယာ ကိုတောင် မဖြတ်နိုင်တာ၊ မိန်းမကို ဖြတ်နိုင်ပါ့မလား “ ” ဘီယာက အသည်း​ ထိတယ်လေ “ ” မိန်းမ​ကို ချစ်ရတာ နှလုံးသားကို စုတ်ပြတ်သတ်ခံပြီး ချစ်ရတာ ၊ ပိုထိတယ် …